Furitaanka ciyaaraha kubada cagta Somalida ee Helsink Cup-2011 sanadkii 17 (Sawiro) – SBC
Furitaanka ciyaaraha kubada cagta Somalida ee Helsink Cup-2011 sanadkii 17 (Sawiro)
Posted by editor on June 18, 2011 Comments
Waxaa maalini-nimaddii Arbacda Taarikhdu ku beegnayd 15/06/2011, lagu qabtey magaalada Helsinki, ee Caasimada Wadanka Finland koobka Helsinki-Cup oo ay ku baratamayeen sanadkaan 10 kooxood, kuwaasoo ka kale yimid magaalooyin kale duwan oo ku yaalo dalka Finland.Koobkan ayaa waxaa soo agaasimay iskuna soo dubariday Ururuka Somali Culture Sports, waxa uuna socon doona muddo todobaad ah
Ururkan oo ah mid had iyo jeer qabta sanadkasta Koobkan, ayaa sanadkan ka dhigaysa kii17-aad ee uu qabto, iyadoo Ciyaarahan loogu talo galay dhalinyarada Somaliyeed ee ku dhaqan wadankan Finland inay kaga faa,idaystaaan dhanka is dhexgalka iyo horumarka dhalinyarada
Gudoomiyaha Ururka Dhaqanka Iyo Sportska Mudane Axmed C/laahi Imad ayaa mar uu ka hadlayay Furitaaanka Koobkan waxaa kamid ahaa hadaladiisa, aad ayaan ugu faraxsanahay bilowga koobkan manta waxa uu noqonayaa kii 17aad ee aan uqabano dhalinyarada somaaliyeed ee Finland waxaan halkan uga mahad-celinayaa dhamaan dhalinyarada kasoo qayb gashay koobkan iyo marti sharafta kala duwan.
Gudoomiye Axmed Imad ayaa wax uu la dardaarmay dhalinyarada halkan ciyaaruhu uga bilaaabmeen inay ilaaliyaaan anshaxa iyo kala danbaynta habdhaqanka inta ciyaaruhu socdaaan, taaso ay dani ugu wada jirto dhamaan dadka halkan isugu yimi maamul iyo ciyaartoyba.
Sidoo kale waxaa ka hadlay Xafladan furitaanka Mxamed Cali Yaanyo, oo horay usoo ahaan jiray Xoghaya Xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya, Mudane Yaanyo ayaaa isna u hanbalyeeyey dhamaan dadki ka soo qayb galay iyo Ururka soo agaaasimayba, kuna tilmaamay wax lagu farxo inay dhalinyarada soomaliyeed ee qurbaha ku nool isugu yimaadaaan meeel noocan oo kale ah, iyagoo waxbadan ka faa,iidaya inta ciyaaarahani socdaaan.
Xafladan ayaa isna waxaaa ka hadlay Daahir Macalin oo horay isna xilal kala duwan ka soo qabtay Ururka Olympikada Soamaaliya, kuna booriyay Ciyaartoyda inay muujiyaaan ciyaar wanaaag, siloogu raaxaysto daaawashada ciyaaraha aad soo bandhigaysaan.
Guntii iyo gabagabadi xafladan furitaanka Helsinki-Cup oo uu soo agaasimo Ururka dhaqanka iyo Sportska ee Socus aya waxaaa lagu furay laba kooxood oo kakala socday Magaaladda caasimada ah ee Helsinki iyo Degmada ku dhagan ee Vaanta kuwaaso kala ah Banaadir iyo R 3. waxaana najiidada ciyaartii ay wada ciyaareen ku soo idlaatay 1-0 oo ku badiyay Kooxda R3.
Marti sharaftii iyo gudiga qabanqaabada ka mid ahaa Macallin bashiir oo ka mid ah odayasha isboortiga dalkan finland Maxamed yaanyo,Daahir,Cali Shariif, Maxamed Cabdi, Xabiib, Ina,Saciid Keysaney,Malaay ,Abaajibil,Cawale,Axmadey,Gudiga qabanqaabada Axmed Imad, Juujuule,C/fitaax,Mara,C/weli,Macalin Xasan,garsooruhuna waxuu ahaa garsoore somali ah Yusuf Maaweel.
Maxamed Bashiir (Maxamed Info)
Cabdulaahi Bogsom says:
okey Maansha`allaah waay fiicanyihiin
Mahamed abdikariim muuse says:
Puntland way hormartay ilaahayna waxaan uga baryayaaaa inuu kuwa kawada khal khalka dhibaato oo waxgaradka lagu ugaarsanayo ilaahay ka cirib tiro waa hubaal inay yihiin kuwo aan caqli lahayn oo aan wax damiira lagu arag plz dalkayaga noga daaya dhibka lana shaqayee dawlada our president faroole i wish u the best work